Iincwadi Iingcaphuno zothando
Abanye banokubabiza ngokuba banomdla, kodwa basebenzela umlingo omkhulu
Yintoni oyenzayo yokuqala xa uva umntu usebenzisa i-cheesy line? Ukuba u-closet-romantic, u-pooh-pooh intetho yokuthandana yothando . Unokuba wenza ubuso obunxungukisayo kwaye uxelele abanye ukuba abathandekayo abathandi abancinci . Kodwa ngokunyanisekileyo, akunakuyithandi xa umntu esetyenzisiweyo umgca?
Into eyenzekayo kuthi xa siva iingcaphuno zothando. Ngaphandle, senza ngathi squeamish. Kodwa ngaphakathi, siyakuthandana nothando olunzulu olugqithisa ngaphandle kwendlela yokuphola.
Phula i-Ice ngeCheesy Love Quotes
Iingcaphuno zothando ze-Cheesy zihle kakhulu xa zifuna ukusebenzela umtsalane wakho ngosuku lwakho. Enyanisweni, ezininzi izibini ziye zatsho ukuba i-cheesy ithande iicatshutshi ziyi-clinchers. Kwiminyaka emininzi kamva, izibini ziyakhumbula ukukhumbula okokuqala ngqa badibana nabo, ngokusoloko zikhankanya umgca we-cheesy ophawulwe uphawu. Njengoko iminyaka ihamba, izibini ziwela kwindawo yentuthuzelo, kwaye ukubonakaliswa kokuthandana koluhlungu kuya kuba nzima. Kodwa uthando alupheli. Xa iqabane lakho lenze isiboniso sothando somntu ngokusebenzisa imigca emihle, awukwazi ukunceda uzizwe konke okuthandanayo.
Indlela Yokumisa Umhla Wakho NgeSuku LwaValentine
NgeSuku lweValentine , susa zonke izithuba. Ingaba ungatshatanga okanye ungatshatanga, sebenzisa iincwadana zokuthanda i-cheesy ukuze uhlambele umnandi wakho. Usuku lukaValentine lungumzekelo ocacileyo wokuthetha into ephilileyo. Unokumangalela kwiCapeid. Hamba uthando olongezelelweyo lwamanzi kunye neshafa kumntu oyithandekayo.
Gxotha ihlazo kunye nokwesaba ukukhishwa. Funda ezinye iincopho zothando ze-movie ezithandwayo kunye nokudlala i-Romeo okanye i-Juliet. Umthandi wakho unokuba neentloni okanye udibaniswe ngokubonakaliswa kwakho ngokukhawuleza. Kodwa xa bekhangela emuva, baya kugcina le nkumbulo yothando.
URenee Zellweger, "uJerry Maguire"
Uthando lokwenene aluveli ngokufumana umntu ofezekileyo, kodwa ngokufunda ukubona umntu ongaphelele. "
UFranklin P. Jones
" Uthando aluthabatheli ihlabathi.
Uthando lukwenza ukuba uhambo luzuze. "
Uthando lunqoba zonke izinto ngaphandle kobuhlwempu kunye neentlungu.
Uthando luyinto enzima yokuqonda ukuba into engeyiyo yodwa. "
"Abanye abantu babone iingelosi, kodwa ndikubonayo, kwaye unelisekile."
Uthando bubomi. Ukuba ulahlekelwa uthando, uphoswa ubomi.
"Ukuba ndicinezelekile ukuba ndiyintoni na ukuba ndiyamthanda, ndicinga ukuba kunokucaciswa kuphela ngokuphendula:" Kuba nguye; kuba bekunguye. "
U-Anthony Hopkins, "Hlangana noJoe Black"
"Yandisa [uthande] ngokungapheliyo kwaye uyithabathe ekujuleni kwangexesha elide, kwaye usayi kuba negalelo lento endithetha ngayo."
UHeath Ledger , "I-Knight's Tale"
"Ndingambuza igama lakho, ntombi yam? Okanye mhlawumbi iingelosi azikho amagama, ubuso obuhle kuphela."
UColin Firth, "Uthando Ngokwenene"
" Ndiyakuthanda nangona ugule kwaye ubonakala unyanyeka."
URyan Gosling, "uBlue Valentine"
"Andiyazi, ndandiva nje ngaye." Uyazi ukuba ingoma ifike nini kwaye uvele udibanise? "
"Ndingaba neliso elingenakubona; iindlebe ezingenakuva; imile engakwazi ukuthetha, kuneentliziyo ezingenakuzithandana."
"Ndiyakuthanda, kungekhona nje oko ukhona kodwa oko ndikhoyo xa ndikunye."
" Ndiyamthanda kwaye oko kukuqala nokuphela kwayo yonke into."
" Uthando luhlobo olusekelwe emlilweni."
UJames M. Barrie
"Ukuba unothando, awudingi ukuba nantoni na into.
Ukuba awunayo, akukho nto enomnye onayo. "
"Ngubani, othandayo, uhlwempu?"
USam McBratney, "Ucinga ukuba Ndikuthanda Kangakanani"
"Ndiyakuthanda ukuya kwenyanga ... nangemva."
"Sonke sincinci kwaye ubomi buncinane, kwaye xa sifumana umntu onobugovu obuhambisanayo neyethu, sijoyina kunye nabo kwaye siwaxhamla kwaye sibize uthando."
UBilly Crystal, "Xa uHarry Met Sally"
"Xa uqaphela ukuba ufuna ukuchitha ubomi bakho nomnye umntu, ufuna ubomi bakho bonke baqale ngokukhawuleza."
ULiy Tyler, "Ubudlelwane Bodonga"
"Ndingathanda ukuhlanganyela nobomi bodwa kunye nani kunokuba ndijongane nazo zonke iphela zeli lizwe lodwa."
URobert Jordan, "Ivili Lexesha"
"Wenze indawo entliziyweni yam apho ndacinga ukuba akukho ndawo yokunye.
Uwenze iintyatyambo zikhule apho ndihlakulela uthuli namatye. "
"Ukufumana umntu oya kumthanda ngaphandle kwesizathu, kwaye ukuhlamba loo mntu ngezizathu, oko kukulo lonwabo."
U-Edgar Allan Poe, "uAnnabell Lee"
"Sasithandana nothando olungaphezu kothando."
"Uyazi ukuba uthandana xa ungafuni ukulala ngenxa yokuba inyaniso ekugqibeleni ilungile kunamaphupha akho."
"Ukholo lwam uluthando kwaye nguwe kuphela."
"Ndiyandithanda xa ndiyifanelekile kuba kuba ndiyifunayo ngokwenene."
Yiya phambili kunye ne-Wallow kule Zicatshulwa Zothando
Quotes New Love
I-Funny Love Quotes Igcina Ubumnyama Bokuba Ngumdla
Ulahlekelwa Othandekayo? Ezi ngcaphuno ezivela kwiingqungquthela zongeza ukuChukumisa
Iingcaphuno ezi-15 ze-Best Man Man Wedding
Ukucaphuna kweMigangatho yokuThengisa iMiddo yokuDala
Quotes Young Love
Iimvo ezi-Cool Cool ze-Loid-Back Lovers
1996 WWE PPV Iziphumo
Izixhobo zokusebenzisa i-Nanotechnology
Kutheni na kuphela amaSulumane avunyelwe ukuvakashela iSixeko soMoya saseMecca?
Uhlobo lweProfayili - uLo-Fi
IJografi ye-United States Amaphuzu aPhakamileyo
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: Vincere
Umsebenzi weMculo weR & B Artist Joe
Ngeliphi iCawa lePlanga?
Indlela yokucoca i-Paint Brushes yakho
Emva kokufa kweempawu kunye nemiyalezo evela kwizilwanyana